Tranom-piantohana MAMA - Namaly ireo vaovao miely mandoto ny orinasa
Tranom-piantohana MAMA – Novaliana ireo tsaho miely mandoto ny orinasa
Posted on: December 11, 2019 Written by: Book News Categorized in: Malagasy
Nanambara Rakotoarijaona Julien, Tale mikarakara ireo niharam-boina anivon’ny MAMA fa “mijoro miaro ny orinasa manoloana ireo vaovao miely mandoto ny MAMA”.
Manitsy ireo vaovao miely ny MAMA
Manoloana ireo vaovao miely amin’ny haino aman-jery izay milaza fa tsy mandeha araka ny tokony ho izy ny fitantanana ny orinasa MAMA dia nitafa tamin’ny mpanao gazety ny teo anivon’ny filankevi-pitantanana, ny solotenan’ny mpiasa ary ny delegen’ny mpiasa, ny Alatsinainy 9 desambra teo, teny amin’ny foiben’ny Tranom-piantohana MAMA Ambodin’Isotry.
Nilaza ny mpitantana ny MAMA fa “tsy manaiky ny famerenana ny fitantanana amin’ny mpitatitra izay kasain’ireo andian’olona sasany satria mitady ho potehina indray ny Tranom-piantohana”,
hoy ny Tale mikarakara ireo niharam-boina anivon’ny MAMA, Rakotoarijaona Julien.
Nambarany fa tafiditra ao anatin’ireo andian’olona ireo ny “zanakalahin’ny PCA teo aloha izay nampibaby trosa ny orinasa , manaratsy ny Mama ankehitriny sy ny anabavin’ny tale teo aloha. Fitaovana ihany ireo, misy ambadika dia olona tamin’ny fitondrana teo aloha, te ho tale jeneralin’ny MAMA”.
Ny MAMA dia manana sata izay mifehy azy ka mamaritra ny fitsipika hametrahana ny mpitantana. Amin’ny alalan’ny fivoriambe (AG) no hametrahana ny mpitantana. Miisa 8 ny mpikambana ao anatin’ny CA. Ara-dalàna ny fametrahana ireo CA ireo. Efa manodidina ny 29 000 ny mpikambana amin’ny MAMA.
Nisy ny tafatafa nifanaovan’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny MAMA tamin’ny mpanao gazety ny Alatsinainy lasa teo. cc : Toria Dimbiniaina
Momba ireo mpiasa voaroka indray dia dia nilaza Rakotoarijaona Julien fa vokatry ny fanodikodinambola sy fandikan-dalàna no antony nandroahana azy ireo. Hanana porofo avokoa izany rehetra izany.
Toherin’ny mpitantana ny MAMA ny filazana fa tsy mandoa onitra ny orinasa Tranom-piantohana MAMA.
“vola mitenena enina ka hatramin’ny fito miliara Ariary isan-taona ny vola atokana, handoavana onitra. Dosie 2 000 isan-taona no andoavana vola ka ny 1 500 amin’ireo momba ny fanonerana ara-pitaovana. Ady hifanolanana eny amin’ny Fitsarana kosa ny 500 ambiny”.
Hoy ny fanambaran’ny Tale Rakotoarijaona Julien
Nilaza hatrany ireto mpitantana ny MAMA ireto fa “mbola velona ny MAMA, mitombo isan-taona ny mpikambana, efatra isan-taona ny masoivoho misokatra. Mahatratra 29000 ny isan’ny mpikambana ao amin’ny MAMA amin’izao, 72 ny masoivoho, 293 000 ny fiara iantohana ary dimy miliara Ariary isan-taona ny vola ampidirin’ny MAMA ao anaty kitapom-bolam-panjakana”.
Marihina fa “nanomboka ny 2015, tsy manana trosa intsony ity Tranom-piantohana MAMA ity raha toa ka 35 miliara Ariary ny trosa nobabeny teo aloha”, hoy ireo tomponandraikitra eo anivon’ny MAMA.
Tagged as: tranompiantohanamama
Previous post Visite des Parcs nationaux – Une hausse enregistrée
Next post 60 taonan’ny Akany Avoko – Nitsangana ny Akany Avoko Bevalala
0 comments on “Tranom-piantohana MAMA – Novaliana ireo tsaho miely mandoto ny orinasa” Add yours →